Ingcono kunehotele!! Icocekile, icocekile, ilungile !!!
Incinci, kodwa inkulu-in-comfort, i-studio yendlu eyahlukileyo kwindlu enkulu. Ifakwe kumda wesixeko saseNebraska ngembono yelizwe eliqengqelekayo, kuthe cwaka kwaye kunoxolo. Le renti inayo yonke into yokuziva usekhaya. Ibhafu yabucala, ikhitshi kunye nendawo ebukekayo yangaphandle. Indawo ibandakanya iitawuli, iilinen, i-smart tv, i-wifi, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nebhedi etofo-tofo. Ipholile kodwa ibekwe kakuhle kakhulu.
Indawo yethu ifanelekile kuye nabani na ofuna indawo yokuhlala ecocekileyo, nefikelelekayo. Nabani na ukusuka kumsebenzi wethutyana ukuya kwisibini esifuna indawo ezolileyo le renti ilungile. Uya kuba negumbi labucala elinebhafu yakho kunye nekhitshi elikwisakhiwo esahlukileyo ukusuka kwindlu enkulu kwaye liyenza ibe bucala ngakumbi. Ixhotyiswe kakuhle ngezinto eziluncedo ezifana nomenzi wekofu, ikeurig, ifriji, imicrowave, izitya ezahlukahlukeneyo, izitya, iimbiza neepani. Kukho iscreen esisicaba se-smart tv, intambo, i-wifi yasimahla, kunye nebhedi ehonjisiweyo, enomqamelo ogcweleyo. Ibekwe kumda weSixeko saseNebraska, siyimizuzu emi-5 ukuya kwiivenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela ezinokufikelela ngokulula kuhola wendlela 2, 75 kunye no-29.
Siyayithanda indawo esihlala kuyo kuba sikwilizwe apho kunoxolo, kuthuleke kwaye kubucala kakhulu kodwa kusondele kakhulu kwisiXeko saseNebraska kunye nazo zonke izibonelelo zaso.
Sihlala kwindlu esecaleni koluhlu ngoko sihlala sihlala ngeempelaveki kunye nangokuhlwa. Singabantu babucala kwaye sifuna ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo bazo nazo, kodwa sihlala sikhona kuzo naziphi na iingxaki, iinkxalabo okanye imibuzo. Ukuba iishedyuli zethu zihambelana neendwendwe siyavuya kakhulu ukubonelela ngokhenketho olukhokelwayo lwesixeko sethu esihle. Kufuneka usazise ukuba unomdla. Sifuna ukuhlala kwakho kube yinto eyolisayo kwaye ekhumbulekayo.
Sihlala kwindlu esecaleni koluhlu ngoko sihlala sihlala ngeempelaveki kunye nangokuhlwa. Singabantu babucala kwaye sifuna ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo bazo nazo, kodwa sihlal…